Magetsi Line Fittings, Fuse Kutemwa, Girazi Insulator- Yongguang
Pamusoro peMitsara Kukodzera
Inishuwarenzi Uye Fuse Cutout
Kuzvirovera wega Bolt
TINOGADZESA ZVINHU ZVIKURU
Kutsanangurwa: Yedu yepamusoro-yegadhi gadhi rekugara setsvimbo yemhando dzose dzinoshandiswa kugadzira tambo, uye chero danda remagetsi mune njanji nemitsara yekufambisa yemagetsi. Iyo tsvimbo yekugara ine yakasimba kusimba, yakatsiga chimiro uye yakanakisa kubata. Yedu yekugara tsvimbo inobata nekupisa iyo inopa kufanana pakuumbwa kwayo. Iyo yakarongedzwa zvakanaka uye inokwanisa kubereka mhedzisiro yekushisa kwakanyanya uye kudzvinyirira kuri nyore. Tsvimbo yedu yekugara ine maviri akakurusa mhando, ayo ari uta mhando uye tube mhando. Imwe yega yega gara shamhu ichauya ...
Vimba nesu, tisarudze
HEBEI YONGGUANG LINE EQUIPMENT CO., LTD. ndeyebhizimusi repamusoro rine hunyanzvi hwekugadzira, R & D nekutengesa. Nzvimbo yeYongguang iri mune yakakurumbira "Capital of Electric" muChina-Yongnian, iri pedyo neNational Road Road, Handan airport uye chiteshi chechitima.
Iyo kambani yakavambwa muna 1995, isu tiri nyanzvi yekugadzira mumagetsi Magetsi Fittings, kunyanya pamusoro peiyo mutsara inokodzera uye inosimbisa fittings, Composite Insulators, Arrester, Drop-Out Fuse Cutout, Magetsi Zvishandiso zvakadai sekufambisa kwemagetsi uye zvigadzirwa zvekuparadzira. Iyi fekitori inogara munzvimbo ye8000m2, iine mazana maviri eVashandi, kusanganisira makumi mana emhizha maTekinoroji.
Tora chikamu mumitambo yekuratidzira
ZVIREVO & KUTAMBUDZA SHOWS
Noah Lyles: Zvinhu zvishanu zvekuziva nezve World Champion Sprinter
Tsvaga "Noah Lyles" paSpotify kuti uwane mimhanzi yekuAmerican yakataura zvakanyanya nezve mimhanzi uye uchauya usina chinhu. Iye anoenda naNojo18 kana zvasvika kune rake rekudhodha basa (uye Instagram kubata), imwe chete yeazhinji maitiro e quirky yemutongi wenyika 200m anotamba. Ndichiri Lyl ...
Global U-Bolts Musika Maitiro, Mukana, Madhiraivha, Matambudziko uye Porter's mashanu Masimba Kuongorora.
A U-bolt ibhandi riri muchimiro chetsamba U ine screw tambo pamicheto miviri. U-mabhagi akave anoshandiswa zvakanyanya kutsigira pipework, mapaipi kuburikidza neapo zvinyoro uye magirazi anopfuura. Musika wepasi rose weU-Bolts unokosheswa pamamiriyoni xx US US muna 2020 unotarisirwa kusvika pamamiriyoni xx US US pakupera kwa2026, ...
Structural Washers Maketi Maketi Akasvitswa, Zvinodikanwa uye Yakakura Mikana Yebhizinesi 2020 kusvika 2026: Hobson Injini, Ketani Injini Co, Cal-Fasteners, Inc
Iyo Structural Washers Musika mushumo inopa sosi yakakosha yehungwaru data rebhizinesi Strategistist uye kukwikwidza kuongororwa kweYakagadzirwa Washers Market. Iyo inopa iyo Oxygenated Solvents indasitiri inotarisisa pamwe nekukura kwekuongorora uye mutengo wekupedzisira, mari uye zvimwe zvakawanda zvinhu. The re ...
Inotyisa Nhau: Yakakwira Voltage Surge Arrester Musika Yakakura, Yakapfuura Maitiro, Kukura uye Mugovana 2020 kusvika 2025: ABB, Motorola, Eaton Corporation
Chicago, United States: - Chirevo ichi chinobuda sechinhu chine hungwaru uye hwakakwana hwekuongororesa chishandiso uye sosi huru iyo ichakubatsira iwe kuchengetedza chinzvimbo chesimba munzvimbo yepasi rose High Voltage Surge Arrester Market. Izvo zvinosanganisira Porter Masimba mashanu uye PESTLE ongororo yekushandisa bhizinesi rako ...
U-Bolts Musika 2020 Pamwe neCCID-19 Impact Kuongororwa uye Mukana weBhizinesi 2026
Iyo U-Bolts Market ichangobva kubuditsa Global Market kutsvagurudza kudzidza neanopfuura zana indasitiri inodzidzisa tafura uye Mifananidzo yakapararira kuburikidza neMapeji uye nyore kunzwisisa yakadzama TOC pa "U-Bolts Market". Chirevo chinopa ruzivo uye iro riri kufambira mberi bhizinesi ruzivo ruzivo muvhengi kusvika ...
PaJunction yeShahe neDongguajing Village, Liuying County, Yongnian District, Hadan City, Hebei Province, China
Zvakaratidzwa Zvigadzirwa - Sitemap - Nharembozha